RASMI: Dembélé oo maanta qalliin ku maray Waddanka Finland iyo Kooxdiisa Barcelona oo xaqiijisay muddada uu garoomada ka maqnaan doono – Gool FM
(Barcelona) 28 Juun 2021. Waxaa la shaaciyey in Weeraryahanka xulka Faransiiska iyo Kooxda Barcelona ee Ousmane Dembélé uu maanta qalliin ku maray Waddanka Finland.
Kooxda kubadda cagta Barcelona waxa ay xaqiijisay in ciyaaryahankeeda Ousmane Dembélé uu qalliin ku maray Dalka Finland, iyadoo uu garoomada ka maqnaan doono ugu yaraan afar bilood.
Bayaan ka soo baxay Kooxda Barcelona oo lagu daabacay Website-keeda ayaa u dhignaa: “Ousmane Dembélé ayaa si guul leh u maray qalliinka kala bax jilibka midig ah, qalliinka oo lagu qabtay Magaalada Turku ee dalka Finland waxaa sameeyay Dhakhtar Lasse Lempainen, waxaana kormeerayey waaxda caafimaad ee kooxda kubadda cagta Barcelona.
“Qalliinkan ayaa ka dhigan in Weeraryahanka reer France uu garoomada ka maqnaan doono ilaa afar bilood.”
Lambarka 11-aad ee Kooxda Barça ayaa beddel ku soo galay labadii kulan ee ugu horreeyay Xulka France ee heerka Guruubyada tartanka Euro 2020m wuxuuna dhaawac soo gaaray kulankii labaad oo ay la yeesheen Hungary kaasoo ka dhacay Magaalada Budapest.
Xulka qaranka France ee uu ka tirsan yahay Dembélé ayaa kulan qeyb ka ah wareegga bug-baxa Euro 2020 waxa ay caawa la ciyaari doonaan dhiggooda Switzerland.
Dhinaca kale Dembélé ayaa Kooxda Tababare Ronald Koeman u ciyaaray 44 kulan fasal ciyaareedka 2020/21, wuxuuna u dhaliyey 11 Gool.